रविनाको अन्त्येष्टि, ‘हत्यारालाई’ जन्मकैदको माग : कस्तो कारबाही हाला चालकलाई ?
ARCHIVE, NEWSPAPER » रविनाको अन्त्येष्टि, ‘हत्यारालाई’ जन्मकैदको माग : कस्तो कारबाही हाला चालकलाई ?
काठमाडौं – छोरीको शव अस्पतालमा राखिरहँदा समस्या बढ्दै जाने निष्कर्षमा सूर्य चौधरी पुग्नुभयो । उहाँलाई लाग्यो, ‘छोरीको अन्त्येष्टि नगर्नु आफूसँगै परिवारको पीडा पनि थपिँदै जानु हो ।’छोरी दुर्घटनामा परी मारिएको पाँचौं दिन बिहीवार बिहान शिक्षण अस्पतालमा छोरीको शव बुझेर उहाँले अन्त्येष्टि गराउनुभयो । ‘सधैं उही साथ पाउन सकिन्न । दिनदिनै घरमा आउनेहरू घट्दै छन् । म पनि यही कुरामा अल्झेर बस्न सक्दिनँ । परिवार छ, पाल्नुपर्छ । काम नगर्दा खान पाइँदैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।